Differential Stress Refractometer, tena toetrany Stress Polarimeter, Tin Side Detector - Jeff
Naorina tamin'ny 2015 by Jeff Li, Jeffoptics foana izao tontolo izao kilasy voalohany manome fitaovana ho mpanjifa. Ny vokatra dia mampiavaka ny fanapahan-kevitra avo, haingana valiny, matanjaka sy mora ny fandidiana. Ny asa fitoriana dia ny hanomezana matihanina, mazava sy mora-miasa fitaovana ny mpanjifa mba hahatonga ny vokatra tsara tonga ny tsara indrindra.
Miorina amin'ny tsena lehibe indrindra-China, Jeffoptics dia natokana mba hanompo fitaratra orinasa, manome device fivoriana ny mpanjifa fepetra takiana. Mandray ny tombony azo amin'ny in-lalina ara-teknika ny fahalalana sy mafy orina Research & Fampandrosoana fampiasam-bola, Jeffoptics dia vokarina isan-karazany fitaovana fandrefesana tsaina fitaratra ho an'ny fanaraha-maso ny kalitao fitaratra anisan'izany metatra ambonin'ny adin-tsaina, ny adin-tsaina tsisin'ny metatra, adin-tsaina fijery lehibe metatra, mora tezitra fitaratra Solon'anarana sy ny head- fitaovana fitiliana teny amin'ny deceleration fandrefesana.
Za-draharaha sy ny mpampiasa interface tsara liana amin'ny fifandraisana famolavolana mpamorona fototra.
Jeffoptics fitaovana isan-karazany ho ao anatin'izany ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny fitaratra ambonin'ny metatra adin-tsaina, ny adin-tsaina tsisin'ny metatra, adin-tsaina fijery lehibe metatra, mora tezitra fitaratra Solon'anarana sy ny ...
Ara-teknika sy fanohanana Consulting
Jeffoptics fitaratra manome ny adin-tsaina sy ny fitaratra fandrefesana rafitra fanaraha-maso ny kalitaon'ny asa fanompoana mijery. Isika ihany koa ny R & D fanompoana ho an'ny tsy fitsipika fitaovana.
Koa satria avy any an-tsena, ny JF Series fitaratra metatra ambonin'ny miady saina ireo dia ampiasain'ny tempering fitaratra fototra, fahefana fanamarinana toeram-pampianarana sy ...
JF-1 andian-dahatsoratra fitaratra stress metatra ambonin'ny
JF-2 andian-dahatsoratra tena toetrany Stress Meter
JF-3 metatra ambonin'ny Stress